Fiomanana maika momba ny fizahantany maintso izao ny toetr'andro sy ny toe-karena ara-toekarena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Fiomanana maika momba ny fizahantany maintso izao ny toetr'andro sy ny toe-karena ara-toekarena
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism
Septambra 24, 2021
Simposium fizahan-tany maitso any Seychelles
Ireo mpandray anjara avy amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fiarahamonim-pirenena dia nivory tao amin'ny Hotely Bleu Eden ho an'ny Green Recovery of Symposium momba ny fizahan-tany ny alakamisy 23 septambra mba hanasongadinana ny vonjy taitra sy ny toe-karena ilaina amin'ny famerenana ny fizahantany maitso.
Misy hetsika fiaraha-miasa misy eo amin'ny departemantan'ny fizahantany Seychelles, ny minisiteran'ny fambolena, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny tontolo iainana (MACCE), ary ny vaomiera avo britanika.
Simposium iray dia miresaka ny fitomboan'ny fahalemen'ny fizahan-tany amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro.
Miaraka amin'ny fiankinan-doha lehibe amin'ny fizahan-tany, ireo olana ireo dia maneho loza mitatao ho an'ny toekarena.
Ity hetsika fiaraha-miasa eo amin'ny departemantan'ny fizahan-tany Seychelles ity, ny minisiteran'ny Fambolena, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny tontolo iainana (MACCE), ary ny komisiona avo britanika, dia nanaiky fa mihombo hatrany ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ilay simposium dia nahatsapa ihany koa fa mora tohin'ity sehatra ity amin'ny vinavina maharitra amin'ny fihenan'ny dia lavitra ataon'ny mpitsangatsangana manerantany, noho ny fiahiahiana ny fiantraikan'ny sidina amin'ny sidina. Miaraka amin'ny fiankinan-doha lehibe amin'ny fizahan-tany, ireo olana ireo dia maneho fandrahonana lehibe amin'ny toekarem-pirenena.
Ireo mpandray anjara avy amin'ny sehatra tsy miankina na ho an'ny daholobe dia nizara fitaovana efa misy sy fanao tsara indrindra ankehitriny mandray anjara amin'ny ezaka fanamafisana ny toetrandro sy fanalefahana ao anatin'ny indostrian'ny fizahantany, hanomezana aingam-panahy ny orinasan'ny fizahantany bebe kokoa handray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra ary hanohana mavitrika ny ezaka fiarovana. Anisan'izany ireo mari-pahaizana maharitra azo ekena, fako hendry sy tompon'andraikitra, rafitra fitantanana rano sy angovo ampiasaina amin'ny orinasa, famadihana vahaolana mifototra amin'ny natiora ho an'ny orinasa miorina amin'ny natiora, ary fampifandraisana ny fiarovana ny fizahan-tany momba ny fizahantany sy ny fampandrosoana ny varotra.
Tao amin'ny fanambarana nataony tao amin'ny simposium dia nilaza ny minisitra Radegonde fa ny zava-nitranga tao anatin'ny roa taona dia nampiseho taminay ny fiovan'ny fiovana eo amin'izao tontolo izao sy ny fomba fizahan-tany marefo amin'ny zavatra ivelany, indrindra amin'ny fanjakana nosy kely.
“Izahay koa dia manatri-maso ny fiakaran'ny mpitsangatsangana bebe kokoa amin'ny tontolo iainana, izay manantena bebe kokoa ny toeran'ireo fizahantany hanome safidy fizahan-tany maharitra. Ohatra, ny fikarohana dia mampiseho fa tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny olona mikasa ny hisidina kely noho ny fialantsasatra mba hamerana ny fandefasana fiaramanidina CO2 sy ny dian-tongotr'izy ireo. Ho fanampin'izany, ireo mpikatroka amin'ny toetrandro, dia nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra "mahamenatra" sidina manerana an'izao tontolo izao, indrindra ny any Eropa, mandreraka ny sidina lavitra. Ireo hetsika ireo dia toa mahazo vahana. Ary tsy dia miorina amin'ny indostrian'ny fizahantany izy ireo. Tonga eo amin'ny sampanan-dalana izahay ka mila misafidy am-pahendrena ho an'ny ho avy maharitra ary indrindra indrindra ho an'ny vahaolana voajanahary izay preoccupation afovoany aorian'ny COP 26, "hoy ny minisitra Radegonde.
Ny simposium koa dia nanararaotra nanazava bebe kokoa Seychelles'Fanavaozana ny fandraisana anjaran'ny firenena (NDC) - mifantoka amin'ny fanoloran-tena nasionaly fizahan-tany - hampahafantatra ireo mpiombon'antoka mpizahatany ny lanjan'ity sehatra ity amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo ao anatin'ny dimy ka hatramin'ny folo taona ho avy.
Resadresaka ifanaovana momba ny lohahevitra momba ny "Green Recovery of Tourism; Tanjona, Fahafahana ary Ilaina ”koa ny tolakandro. Ny panelists dia niresaka ny habetsaky ny asa sy ny fahafaha-mitaky ny fandraharahana izay mety hitondran'ny fanarenana fizahan-tany maitso ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana; ny filàna fanarenana izay tafiditra ao anatin'ny fandinihana ny filàna sy ny fanamby amin'ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany rehetra; ny fomba fandraisana anjara amin'ny fanarenana maintso an'i Seychelles 'Blue Economy, ary ny fomba fizahan-tany fizahan-tany voajanahary ho an'ny fandaharanasa fiarovana maharitra mandritra ny fotoan-tsarotra amin'ny sehatry ny fizahan-tany, toy ny naseho tamin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 manerantany.
Ny mpandray anjara dia naneho ihany koa ny filàna takiana mba hahatratrarana Green Recovery of fizahantany - sy ny tanjon'ny fanovana ny toetr'andro sy ny fanalefahana - ho ampahany amin'ny famokarana antontan-taratasy vokam-pifidianana. Ity antontan-taratasy fohy ity dia haneho ny tanjon'ny simposium ary hamintina fohifohy ireo fifanakalozan-kevitra sy fisaintsainana natao nandritra ny hetsika. Ny antontan-taratasy koa dia manasongadina fampanantenan-tena mifototra amin'ny NDC mifototra amin'ny fizahan-tany - hampiasaina ho teboka hanovozan-kevitra amin'ny ho avy - izay hanasana ny mpandray anjara hanao sonia.
Ny zava-dehibe dia nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ireo mpandray anjara fa Seychelles dia napetraka tsara mba hifanaraka amin'ny fiovan'ny toetran'ny mpanjifa amin'ny dia iraisam-pirenena ary ho mpitondra manerantany momba ny fizahan-tany maharitra - azo lazaina fa mihoatra ny toeran-kafa rehetra. Ny fizahan-tany Green Recovery ao Seychelles, araka ny soso-kevitr'ity Symposium ity, dia hanova ny fandrahonana ara-toekarena manan-danja, ho fotoana ara-toekarena maharitra.
Recipe famenon'ny Thanksgiving vaovao nasiana fofona avy amin'ny fotsy...
Ny Airbus sy ny Air Lease Corporation dia namoaka vaovao marobe ...
Mpamboly fotsy: fitoriana vaovao momba ny fanavakavahana
Efa vita vaksiny 100% tanteraka izao ny ekipan'ny sidina Cebu Pacific
Ahoana ny fandehanana miaraka amin'ny Omicron Strain COVID Vaovao?